Global Voices teny Malagasy » Hahafantatra Izay Ho Filoham-pireneny Manaraka i Indonezia, Demaokrasia Fahatelo Goavana Manerantany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2014 5:25 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Ilay politisiana malaza Joko Widodo (fantatra amin'ny anarana Jokowi ) no mitarika amin'ny valim-pifidianana vonjimaika, mpandraharahan'ny fampitaovana teo aloha izay lasa governoran'i Jakarta, renivohim-pirenena izy. Ny Filoha lefitra teo aloha Jusuf Kalla no mpiray lisitra aminy.
Kandidà hafa matanjaka mpifanandrina aminy ho filoham-pirenena kosa i Prabowo Subianto, Jeneraly teo aloha tao amin'ny Vondron-tafika Manokana ary filohan'ny Antoko Gerindra (Hetsika Goavan'i Indonezia). Na dia noderain'ireo mpanohana azy ho filoha matanjaka sy be herim-po aza izy, naneho ny ahiahiny  mikasika ny andraikiny nandritra ny fitondran'i Suharto , izay nitondra an'i Indonezia tahaka ny lehilahy matanjaka nandritra ny taompolo telo mahery kosa ireo mpikatroka zon'olombelona maromaro.
Naharitra iray volana ny fampielezan-kevitra. Na dia feno >fifanaratsiana , fanambarana kolikoly , sy fifandonana  madinika teo amin'ireo antoko roa mpifaninana aza. Amin'ny ankapobeny, hita fa nilamina, nirindra sy feno zava-baovao mihitsy aza ny fifidianana.
Ny tarik'i Jokowi no nivoaka toy ny tompon-daka  amin'ny resaka fanentanana ny mpifidy tamin'ny alalan'ny media sosialy. Saingy ny antokon'i Prabowo kosa no hita malaza kokoa tamin'ny milina fikarohana.
Nampiasa ny diezy Twitter #salam2jari (arahaba an-drantsa-tanana roa), #jokowi9juli , #nogolput  (tsia amin'ny tsy fifidianana) ary ny #indonesiasatu (Indonezia tokana) mba hanehoan'izy ny fihetseham-pony sy hampisehoany ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana ireo mpifidy.
Sampan-draharaham-pifidianana teo amin'ny 12 teo no namoaka (aloha loatra) ny vokatry ny fanisam-bato taorian'ny fifidianana. Nanambara sahady ny fandresen’ i Jokowi ireo orinasam-pifidianana lehibe raha toa kosa nilaza ny vaovao eny ankilany fa i Prabowo no mety hivoaka mpandresy . Naneho ny ahiahiny ny sampana tokana mpamoaka ny voka-pifidianana fa mety hitarika ady lehibe eo amin'ireo mpanohana ny kandidà roa tonta izany (toe-javatra izany).
Ho setrin'izany ahiahy izany, nanome baiko ny hanaovana fanadihadiana  ataon'ireo mpaka hevi-bahoaka ny Biraon'ny Etika avy ao amin'ny Fikambanan'ny mpanadihady ny hevi-bahoaka Indoneziana (Persepi) ary nanaisotra  ireo izay sy mety hohadihadiana.
Indoneziana marobe no nanaramaso akaiky ny fanisam-bato ofisialy tao amin'ny habaky ny KPU ary mampitaha izany amin'ireo tarehimarika alefa ao amin'ny Kawalpemilu.org  (vadin-tanim-pifidianana), habaka natsangan’  ilay mpanao olaimpiadin'ny matematika Indoneziana mba hahafahan'ny olona manaramaso ara-potoana ireo vokam-pifidianana voaangon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy eny ifotony. Hatramin'ny nijoroany, efa imbetsaka nisy nipiraty ny habaka.
Mandritra izany fotoana izany, nampiakatra ny porofon'ireo tsy fetezana  tamin'ny latsa-bato nasehon'ny taratasy C1 vita scan tsikaritry ny mpifidy tao amin'ny habaky ny KPU ny kaonty Tumblr C1 yang Aneh  (zavatra hafahafa nasehon'ny C1). Antontan-taratasy ofisialy avoakan'ny KPU ny Taratasy C1 izay ampiasaina amin'ny fitaterana ny isam-bato vita isan'ny mpikamban'ny biraom-pifidianana. Efa nandefa pikantsary am-polony ny kaonty izay mampiseho ny tsy fisian'ny isan'ny mpifidy na isam-bato vita ary ny tsy fetezana hafa.
Bilaogera iray fantatra amin'ny anarana “Simple Servant “namehy  ny fifidianana tamin'ity taona ity ary nilaza ny mahamety ho lasa mpampihavana ireo antoko mpifanandrina ankehitriny ny filoha am-perinasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/24/62185/
 valim-pifidianana filoham-pirenena : http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/indonesia/story/indonesians-19-cities-abroad-first-vote-20140705
 nanoro-hevitra : https://www.facebook.com/IrHJokoWidodo/posts/346837128801740
 tsy fetezana: http://c1yanganeh.tumblr.com/image/91839401517
 Simple Servant: http://m.kompasiana.com/user/profile/Ebenezer.Sembiring
 namehy : http://m.kompasiana.com/post/read/668258/2/trimakasih-kepada-prabowo-kita-rusuh-atau-tidak-terserah-sby.html